Iwu nzuzo – Pịa ebe a iji malite ibelata URL.
Pịa ebe a iji malite ibelata URL.
URL shortener na nchịkọta, nyocha geo, ịchọta njikọ, API, njikọ njikọta dị ukwuu site na faịlụ, na mgbochi aghụghọ site na mmemme mmekọ.
https://shortest.link Iwu nzuzo
Ejikọtara iwu nzuzo a iji nyere ndị na-echegbu onwe ha banyere otu esi eji ‘Ozi Nkeonwe’ (PII) n’ịntanetị. PII, dịka akọwara na iwu nzuzo nzuzo na nchekwa ozi nke US, bụ ozi enwere ike iji ya n’onwe ya ma ọ bụ jiri ozi ndị ọzọ mata, kpọtụrụ, ma ọ bụ chọta otu onye, ma ọ bụ iji mata onye ọ bụla. Biko gụọ iwu nzuzo anyị nke ọma iji nweta nghọta doro anya banyere otu anyị si anakọta, jiri, chebe, ma ọ bụ na-ejikwazi Ozi Nkeonwe Gị dabere na weebụsaịtị anyị.
Kedu ozi nkeonwe anyị na-anakọta n’aka ndị bịara na blọọgụ anyị, weebụsaịtị, ma ọ bụ ngwa anyị?
Mgbe ị na-enye iwu ma ọ bụ debanye aha na saịtị anyị, dịka o kwesiri, enwere ike ịgwa gị ka itinye Long Url gị, Short Url, ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ iji nyere gị aka na ahụmịhe gị.
Kedu mgbe anyị na-anakọta ozi?
Anyị na-anata ozi n’aka gị mgbe ị dejupụtara mpempe akwụkwọ ma ọ bụ tinye ozi na saịtị anyị.
Kedu ka anyị si eji ozi gị?
Anyị nwere ike iji ozi anyị nakọtara n’aka gị mgbe ị debanyere aha, zụta ihe, debanye aha maka akwụkwọ akụkọ anyị, zaghachi nyocha ma ọ bụ nkwukọrịta ahịa, sọfụ weebụsaịtị, ma ọ bụ jiri ụfọdụ saịtị saịtị ndị ọzọ n’ụzọ ndị a:
• Iji melite weebụsaịtị anyị iji nyere gị aka ijere gị ozi.
Kedu ka anyị si echebe ozi gị?
Anyị anaghị eji nyocha onyunyo na / ma ọ bụ nyochaa na ụkpụrụ PCI.
Naanị anyị na-enye akụkọ na ozi. Anyị anaghị ajụ ase nọmba kaadị akwụmụgwọ.
Anyị na-eji nyocha Malware oge niile.
Ozi nkeonwe gị dị n’azụ netwọk echekwara ma enwere ike ịnweta ya naanị site na mmadụ ole na ole nwere ikike nnweta pụrụ iche na sistemụ ndị a, ma chọọ ka ha zobe ozi ahụ. Na mgbakwunye, ozi nzuzo niile / kredit ị nyere bụ ezoro ezo site na teknụzụ Secure Socket Layer (SSL).
Anyị na-etinye usoro nchekwa dị iche iche mgbe onye ọrụ batara, nyefee, ma ọ bụ nweta ozi ha iji chekwaa ozi gbasara gị.
A na-edozi azụmahịa niile site na ndị na-eweta ọnụ ụzọ ámá ma anaghị echekwa ma ọ bụ hazie ya na sava anyị.
Anyị na-eji ‘kuki’?
Eeh. Kuki bụ obere faịlụ nke saịtị ma ọ bụ onye na-eweta ọrụ ya na-enyefe na draịvụ kọmputa gị site na ihe nchọgharị weebụ gị (ọ bụrụ na ị kwe) nke na-enyere saịtị ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ aka ịmata ihe nchọgharị gị ma jide ma cheta ụfọdụ ozi. Iji maa atụ, anyị na-eji kuki enyere anyị aka icheta na hazie ihe ndị dị n’ụgbọ ahịa gị. A na-ejikwa ha enyere anyị aka ịghọta mmasị gị dabere na ọrụ saịtị ma ọ bụ nke ugbu a, nke na-enyere anyị aka ịnye gị ọrụ ndị ka mma. Anyị na-ejikwa kuki iji nyere anyị aka kpokọta data mkpokọta gbasara okporo ụzọ saịtị yana mmekọrịta saịtị ka anyị wee nwee ike ị nweta ahụmịhe na ngwa ọrụ ka mma n’ọdịnihu.
Anyị na-eji kuki iji:
• Na-agbaso mgbasa ozi.
• Chịkọta mkpokọta data gbasara okporo ụzọ saịtị na mmekọrịta saịtị iji nye ahụmịhe saịtị na ngwaọrụ dị mma n’ọdịnihu. Anyị nwekwara ike iji ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi nke na-agbaso ozi a na nnọchite anyị.
Nwere ike ịhọrọ ka kọmputa gị dọọ gị aka na ntị oge ọ bụla a na-eziga kuki, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ gbanyụọ kuki niile. Na-eme nke a site na mwube ihe nchọgharị gị. Ebe ihe nchọgharị ahụ dị ntakịrị, lee NchNhr Enyemaka nke ihe nchọgharị gị iji mụta ụzọ ziri ezi iji gbanwee kuki gị.
Ọ bụrụ na ịgbanyụ kuki, ụfọdụ atụmatụ ndị na-eme ka ahụmịhe saịtị gị rụọ ọrụ nke ọma nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọ gaghị emetụta ahụmịhe onye ọrụ nke na-eme ka ahụmịhe saịtị gị rụọ ọrụ nke ọma ma ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ na-ebufe ndị ọzọ na mpụga ozi nkeonwe nkeonwe gị belụsọ na anyị nyere ndị ọrụ ọkwa ọhụụ. Nke a anaghị agụnye ndị mmekọ websaịtị na ndị ọzọ na-enyere anyị aka ijikwa weebụsaịtị anyị, na-eduzi azụmaahịa anyị, ma ọ bụ na-ejere ndị ọrụ anyị ozi, ọ bụrụhaala na ndị ọzọ kwenyere idobe ozi a. Anyị nwekwara ike ịhapụ ozi mgbe ewepụtara ya dabara adaba iji rube isi n’iwu, ịmanye atumatu saịtị anyị, ma ọ bụ ichebe nke anyị ma ọ bụ nke ndị ọzọ, ihe onwunwe ma ọ bụ nchekwa.
Agbanyeghị, enwere ike ịnye ozi ndị ọbịa na-abụghị nke onwe gị na ndị ọzọ maka ahịa, mgbasa ozi, ma ọ bụ ojiji ndị ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, site na nghọta anyị, anyị nwere ike ịgụnye ma ọ bụ nye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị. Saịtị ndị ọzọ a nwere amụma nzuzo dị iche iche. Ya mere, anyị enweghị ọrụ ma ọ bụ ụgwọ maka ọdịnaya na ọrụ nke saịtị ndị a jikọtara. Ka o sina dị, anyị na-achọ ichedo iguzosi ike n’ezi ihe nke saịtị anyị ma nabata nzaghachi ọ bụla gbasara saịtị ndị a.
Enwere ike ichikota ozi Mgbasa ozi Google site na Googlekpụrụ Mgbasa Ozi Google. Edebere ha iji nye ahụmịhe dị mma maka ndị ọrụ. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Anyị na-eji Google AdSense Advertising na weebụsaịtị anyị.
Google, dịka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi na saịtị anyị. Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ anyị dabere na nleta ndị gara aga na saịtị anyị na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị. Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na iwu nzuzo nke Google Ad na Ọdịnaya Network.
• Remarteting na Google AdSense
• Google Ngosipụta Mmetụta Network Reporting
• Demographics na Mmasị na-akọ
• DoubleClick Platform Mwekota
Anyị, yana ndị na-ere ahịa ndị ọzọ dị ka Google na-eji kuki ndị ọzọ (dị ka kuki Google Analytics) na kuki ndị ọzọ (dị ka kuki DoubleClick) ma ọ bụ ihe nchọpụta ndị ọzọ ndị ọzọ iji kpokọta data gbasara mmekọrịta onye ọrụ na ngosi mgbasa ozi na ọrụ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ dịka ha si emetụta weebụsaịtị anyị.
Ndị ọrụ nwere ike ịtọ mmasị maka otu Google si akpọsa gị na iji peeji Google Ad Settings. N’aka nke ọzọ, ịnwere ike ịpụpụ site na ịga na peeji nke Network Advertising Initiative Opt Out ma ọ bụ site na iji Google Analytics Opt Out Browser tinye na.
Kedu data reCAPTCHA na-anakọta?
Nke mbụ niile algorithm reCAPTCHA ga-elele ma ọ bụrụ na enwere kuki Google na kọmputa eji.
N’ikpeazụ, a ga-agbakwunye kuki ọzọ reCAPTCHA ọzọ na ihe nchọgharị onye ọrụ ahụ ma jide ya – pixel site na pixel – foto zuru ezu nke windo ihe nchọgharị onye ọrụ n’oge ahụ.
Fọdụ ihe nchọgharị na onye ọrụ ozi anakọtara ugbu a gụnyere:
All kuki Google setịpụrụ na ọnwa 6 gara aga,
Ugboro ole ka ịpị pịa na ihuenyo ahụ (ma ọ bụ metụ ma ọ bụrụ na ngwaọrụ emetụ),
Ozi CSS maka ibe ahụ,
– asụsụ nke edobere ihe nchọgharị ahụ,
Ihe ọ bụla nkwụnye arụnyere na ihe nchọgharị ahụ,
Iwu Nchedo Nzuzo California Online
CalOPPA bụ iwu steeti mbụ na mba ahụ chọrọ weebụsaịtị na azụmaahịa yana ọrụ ịntanetị iji biputere iwu nzuzo. Iwu iru erutela karịa California chọrọ mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ na United States (na conceivably ụwa) na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-anakọta Ozi nkeonwe Ozi si California na-eziga biputere a mara iwu nzuzo na ya na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwupụta kpọmkwem ozi anakọtara na ndị ahụ ndị mmadụ n’otu n’otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị a na-ekekọrịta ya. – Lee ihe na http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Dabere na CalOPPA, anyị kwenyere n’ihe ndị a:
Ndị ọrụ nwere ike ịga na saịtị anyị n’amaghị ama.
Ozugbo emepụtara iwu nzuzo a, anyị ga-agbakwunye njikọ ya na ibe obibi anyị ma ọ bụ dịka opekempe, na peeji mbụ dị mkpa mgbe anyị banyere websaịtị anyị.
Usoro Nzuzo anyị gụnyere okwu ‘Nzuzo’ ma nwee ike ịchọta ya na ibe akọwapụtara n’elu.
A ga-amara gị ọkwa maka mgbanwe Nzuzo ọ bụla:
• Na Usoro Nzuzo Anyị
Nwere ike ịgbanwe ozi gbasara gị:
• Site na email anyị
Kedu ka saịtị anyị si ejikwa Nsuso Nsuso?
Anyị na-asọpụrụ Nsuso Nsuso na Esona, kuki kuki, ma ọ bụ jiri mgbasa ozi mgbe usoro ihe nchọgharị Esona (DNT) dị.
Ebe nrụọrụ anyị ọ na-ekwe ka nsuso akparamagwa nke atọ?
Ọ dịkwa mkpa iburu n’uche na anyị na-ekwe ka nsuso akparamagwa nke atọ
COPPA (Iwu Nchedo Nzuzo Childrenmụaka na Onlinemụaka)
A bịa nchikọta ozi nkeonwe sitere n’aka ụmụaka na-erubeghị afọ iri na atọ, Iwu Nchedo Nzuzo Childrenmụaka n’ Onlinentanet (COPPA) na-etinye ndị nne na nna. Federal Trade Commission, ụlọ ọrụ nchebe ndị ahịa nke United States, na-akwado Iwu COPPA, nke na-akọwapụta ihe ndị na-arụ ọrụ weebụsaịtị na ọrụ ịntanetị ga-emerịrị iji kpuchido nzuzo ụmụaka na nchekwa ha n’ịntanetị.
Anyị anaghị ewepụta maka ụmụaka n’okpuru afọ iri na atọ.
Ànyị na-ahapụ ndị ọzọ, gụnyere netwọọdụ mgbasa ozi ma ọ bụ nkwụnye, nakọta PII site na ụmụaka n’okpuru 13?
Omume Ozi Ọma
Informationkpụrụ Iwu Ihe Omume Ọma bụ ihe ndabere nke iwu nzuzo na United States na echiche ndị ha gụnyere ekerewo òkè dị ukwuu na mmepe nke iwu nchebe data gburugburu ụwa. Understandghọta Informationkpụrụ Omume Ozi Ọma na otu esi etinye ha n’ọrụ dị oke mkpa iji rube isi na iwu nzuzo dị iche iche na-echebe ozi nkeonwe.
Iji nwee ike ịdị n’usoro Ezigbo Ihe Omume Anyị ga-eme ihe na-esonụ, ọ bụrụ na mmebi data emee:
Anyị ga-agwa ndị ọrụ site na ngosi saịtị
• N’ime ụbọchị azụmahịa 7
Anyi kwenyere na Onye isi Ndozi Onwe Onye nke choro na ndi mmadu nwere ikike ichoro ikike nke megidere iwu ndi nchikota data na ndi na akwado ha na akwadoghi iwu. Thiskpụrụ a chọrọ ọ bụghị naanị na ndị mmadụ nwere ikike megidere ikike megide ndị ọrụ data, kamakwa na ndị mmadụ na-agaghachi n’ụlọ ikpe ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị ka ha nyochaa ma / ma ọ bụ kpee ndị na-akwadoghị iwu site na ndị na-arụ ọrụ data.
Iwu CAN-SPAM bụ iwu na-edozi iwu maka email azụmahịa, na-ewepụta ihe achọrọ maka ozi azụmahịa, na-enye ndị nnata ikike ka ha kwụsị ozi ịntanetị na ezigara ha, wee kọwaa ntaramahụhụ siri ike maka mmebi iwu.
Anyị na-anakọta adreesị email gị iji:
Iji dị na CANSPAM, anyị kwenyere n’ihe ndị a:
• Ejila isiokwu ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie ma ọ bụ adreesị ozi-e.
• Chọpụta ozi dị ka mgbasa ozi n’ụzọ ụfọdụ ezi uche dị na ya.
• Gụnye adres anụ ahụ nke azụmaahịa anyị ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ saịtị anyị.
• Nyochaa ọrụ ịre ahịa email nke atọ maka nnabata, ma ọ bụrụ na ejiri ya.
• Sọpụrụ arịrịọ nwepu aha / wepu aha ngwa ngwa.
• Nye ndị ọrụ ohere ịwepu aha site na iji njikọ dị na ala nke email ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’oge ọ bụla ịchọrọ ịwepu aha na ịnweta ozi ịntanetị n’ọdịnihu, ị nwere ike zitere anyị ozi na
abuse@shortest.link na anyị ga-ewepụ gị ozugbo ALL ozi.
Ọ bụrụ na enwere ajụjụ gbasara iwu nzuzo a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji ozi dị n’okpuru.
Oge Ikpeazụ na 2021-01-11
Akwụkwọ ndekọ aha nke URL
Short njikọ ụdị maka egwu choro
Họrọ ihe ndị dị mkpa
Shortening URL na-enweghị ndekọ
Nnukwu URL shortening
Nchọpụta ọdịdị ala
Omenala obere URL
Mgbochi wayo site na mmemme mgbakwunye
Features: Njikọ nsochi
Mbelata URL na-enweghị mgbasa ozi
Nnukwu URL shortener
Pịa ebe a iji malite ibelata URL. Proudly powered by WordPress